ChiGerman Hunhu ChinaPrice Monotube Damping inogadziriswa coilover
Powder Metal Sintered Chikamu base vharafu yeShock Abso...
ChiGerman Hunhu ChinaPrice Monotube Damping inogadziriswa...
Chikamu Zita Coilover mu Auto Shock Absorber
Surface Color Tsvuku / Goridhe / Bhuruu / Nhema / Bhuruu / Nhema, sezvinodiwa nevatengi.
Applications BMW E46 kana imwe mota
Adjustable Inogadziriswa Damping, Inogadziriswa Hurefu, uye Inogadziriswa Cylinder
Quality Control Inoitiswa ne ISO9001/TS16949:2002
Packing Inner Ruvara Bhokisi, Outer-Standard Carton Box
Mutengi's Logo Print Hongu, Dhinda Chiratidzo paRuvara bhokisi/paShock Body zvese zviripo
Warranty 1 gore waranti kune chero kukanganisa kwekugadzira
Huwandu: 2 chidimbu pamberi + 2 zvidimbu kumashure
Adjustable urefu Ehe
Damper inogadziriswa Damper
Inogadziriswa camber plate Ehe
Feature -Zvizhinji zvikamu zvinogadzirwa kubva ku6063 aluminium neT6 yekuwedzera kuoma
- izvo zvakanakira zvinosanganisira simba rakanakisa, uye aruminiyamu inobatsira kuchengetedza uremu.
- Hi Tensile performance spring - Pasi pe600,000 nguva dzinoramba dzichiyedzwa, kukanganiswa kwechirimo kuri pasi pe0.04%.
Uyezve, iyo yakakosha yekurapa kwepamusoro ndeyekuvandudza kusimba uye kuita.
-Yese anoisa anouya neakaiswa rubber bhutsu kuchengetedza damper uye kuramba yakachena.
Iyo inokurumidza uye inokwanisika nzira yekusimudzira zviri nyore chitarisiko chemota yako.
-Pillow Ball Mount ine spherical bearing
- Poly Urethane bushings (Kana Ichishanda)
– Simba Coated Damper Muviri
-Oil Seal shandisa yakakurumbira brand mafuta chisimbiso -NOK, kuita chisimbiso kwakanaka, hupenyu hwakakwira se2000000 kana kupfuura.
-Piston Rod Mirror-kurapwa kwepamusoro, Hard chrome yakaiswa mukati, yakaita kusimba uye kusimba kwesimba pamusoro pe800 Mpa.
Zvakanakira uye kuipa kwekugadzirisazve coilover
1. Iyo coilover inogona kugadzirisa zvakasununguka kureba kwekuvhunduka uye ukuru hwesimba remukati rekunyorovesa, iro rinogona kuita kuti mota ichinje kumashure nekudzoka maererano nehupamhi hwemotokari uye kuoma kwekumiswa, iyo ine yakanyanya kukwirira. playability uye kushanduka.
2. Kuenzaniswa nepneumatic shock absorber, iyo coilover inewo zvakanakira nyore uye compact chimiro; uye kuvimbika mukana wekuve wakasununguka kubva mukukanganiswa kwezvakatipoteredza.
1. Kana zvasvika pakugadziriswa kwemotokari, zvinonyanya kusanganisira dzimwe nyaya dzekuchengetedza. Kana iri coilover yakagadziridzwa, kana hutano hwechigadzirwa husingagoni kuvimbiswa, kana kugadziriswa kwegungano kusingasviki zvinodiwa, ipapo pachava nenjodzi huru yekuchengetedza.
2. Kuenzaniswa nepneumatic shock absorber, kureba kwekugadzirisa kwekoilover kunogona kutsanangurwa sechikanganiso chayo chikuru. Nekuda kwekuganhurirwa kweiyo shock absorber chimiro, kugadziridzwa kweiyo coilover kunoda kuparadzanisa iyo yese yekuvhundutsa inotorwa kubva mumotokari. Panguva imwecheteyo, nhamba huru yezvishandiso zvakakosha zvinodiwa muhurongwa hwose .
Nzira yekugadzirisa sei coilover kuti ive yakasununguka
Nezve kunyaradzwa kwemazino anomonyorora, isu tinonyanya kugadzirisa simba rekunyorovesa .
Iyo yakakwirira iyo inonyorovesa, iyo yakanyanya kunyaradza kunyaradza, asi zviri nani tsigiro yayo yemotokari, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekutyaira kwakanyanya; iyo yakaderera iyo inonyorovesa, zviri nani kunyaradza, asi tsigiro yayo yemotokari ichachinja zvinoenderana. Musiyano.
Kazhinji, pane knob kugadzirisa simba rekunyorovesa pamusoro pecoilover. Nekutendeutsa wachi uye newachi, tinokwanisa kugadzirisa nyore kupfava nekuoma kwayo. Nezve kuti kugadzirisa kwakasununguka sei, zvinoenderana nechiitiko chaicho chevaridzi.
Iyo coilover yakagadzirwa naMax Auto shandisa chrome plating hollow piston tsvimbo, kuve nechokwadi chekudzikisa simba kugadzikana.
Inoshandisa yakakwira tensile performance spring - Pasi pe600,000 nguva inoramba ichiyedzwa, kukanganiswa kwechirimo kuri pasi pe0.04%.
-Oil Seal shandisa yakakurumbira brand oil seal -NOK, yakanaka yekuisa chisimbiso kuita, hupenyu hwakakwira se2000000 kana kupfuura.
Isu tinopa 1 gore warranty, mukati me1 gore mushure mekutengesa, kana paine chero mhando semuenzaniso inodonha mafuta, isu tinopa iyo yekutsiva chikamu mahara.
Zvakapfuura: China Wholesale Shock Absorber Bushing Suppliers - Yakakwira mhando rabha yakagadzirwa Mota yakamiswa rabha gwenzi - Max
Zvinotevera: Yakakurumbira Kutengesa Rubber Shock Absorber Rubber Buffer
Double Adjustable Coilvers